La mapampu ochungechunge afanele ukudlulisa ukungathathi hlangothi noma okuncane okungcolisiwe noma okuncane uketshezi olonakalisayo ngaphandle kwezinhlayiya eziqinile. Le phampu yochungechunge isetshenziselwa ukucwenga uwoyela, imboni ye-petrochemical, imboni yamakhemikhali, ukucubungula amalahle, imboni yamaphepha, imboni yolwandle, imboni yamandla, ukudla, ikhemisi, ukuvikelwa kwemvelo njalonjalo.
Iphampu yenqubo ye-KZA petrochemical centrifugal ihambisana ne-AOI610 ejwayelekile ngakho-ke kunezici ezithile ngezansi:
2) Ukusebenza kahle kwepompo ngokwesilinganiso kuphakeme ngokulondolozwa kwamandla amancane.
I-4) Ububanzi bokusebenza kwePump bubanzi futhi umthamo omkhulu ungaba ngu-3000m3 / h futhi ikhanda eliphakeme lingaba yi-230m, okwamanje, umthamo wepompo namakhanda ekhanda kuvaliwe ukuze kube lula ukukhetha ipompo.
6) Ukwenza imigomo ejwayelekile neyunivesithi kuphezulu. Ngaphandle kwezingxenye ezijwayelekile ezijwayelekile, umshini wokufaka nempahla we-KZA ne-KZE ungashintshaniswa.
I-7) Impahla yezingxenye zamanzi ikhethwe kusuka ejwayelekile ye-API ngokuya ngesimo somsebenzi noma kumakhasimende.
Iphampu yenqubo ye-KZE, KZEF Petrochemcial centrifugal yenziwe ngokuhambisana ne-API610 ngakho-ke kunezici ezithile ngezansi:
Insimbi Engagqwali IMultistage Centrifugal Pump
Ama-AY Series Centrifugal Oil Pumps